Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » WTTC waxay ka jawaabtaa talooyinkii ugu dambeeyay ee EU
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dib-u-dhiska • Technology • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka UK • Wararka kala duwan • Adeegyada Warka
wttc safarada aaminka ah
Wasiirrada iyo go'aan -qaatayaasha caalamiga ah ee ku sugan xarunta dadweynaha waxay beddelaan xannibaadaha safarka maalin kasta. Wadashaqayn la'aanta caalamiga ah iyo la'aanta nidaam caalami ah ayaa ka dhigaysa mid caalami ah caqabad, xitaa rakaabka la tallaalay.
Sidii WTTC hore u samaysay, ururka matalaya xubnaha ugu badan ee warshadaha socdaalka iyo dalxiiska ayaa maanta sameeyey bayaan kale iyo liis -raadin.
Haddii bayaankani kaa caawin doono inaad keento fal kasta oo sugaya in la arko.
Julia Simpson, Madaxweynaha & Maamulaha Golaha Socdaalka iyo Dalxiiska Adduunka (WTTC) ayaa soo saartay bayaan ay ku tiri: “Ilaalinta caafimaadka dadweynaha waa inay ahaataa mudnaanta iyo WTTC waxay si weyn u taageertaa hab-raaca badbaadada si loo joojiyo faafitaanka COVID-19.
Si kastaba ha ahaatee, soo -jeedinta Midowga Yurub ee dib -u -soo -celinta xayiraadaha saaran dadka socotada ah ee Mareykanka waa tallaabo dib -u -dhac ah waxayna kaliya hoos u dhigi doontaa soo kabashada waaxda.
“Iyada oo leh heerar tallaal oo sarreeya Mareykanka iyo Midowga Yurub labadaba, waa inaan eegnaa furitaanka safarka u dhexeeya labadan dhaqaale ee waaweyn.
Maamulaha WTTC wuxuu raaciyay:
Waxaan u baahanahay xeerar guud oo garwaaqsada tallaalada caalamiga ah kana saara baahida loo qabo in la karantiiliyo dadka leh natiijada COVID ee taban.
“Mareykanku waa suuq muhiim u ah dalal badan oo xubin ka ah Midowga Yurub, sida Faransiiska, Talyaaniga, Jarmalka, iyo Ireland, dalxiiska ayaa muhiim u noqon doona soo celinta nolosha caadiga ah iyo tobanaan kun oo shaqooyin ah labadaba Mareykanka iyo Midowga Yurub.
"Halkii ay ku soo rogi lahayd xannibaadyo socdaal oo waxyeello leh, Midowga Yurub waa inuu ku dhiirri -galiyaa Dowladaha Xubnaha ka ah inay adeegsadaan Shahaadadooda Dijital ah ee COVID si ay si ammaan ah u soo celiyaan socdaalka caalamiga ah, oo aasaas u ah dhaqaalaha Yurub."
The Midowga Yurub saddex maalmood ayaa la hakiyay dhammaan safarradii lama huraanka u ahaa booqdayaasha Mareykanka sababtuna tahay kororka cudurada cusub ee COVID-19 ee Mareykanka.
Portugal, oo xubin ka ah Midowga Yurub ayaa maanta ka fogaatay xeerarka Midowga Yurub oo ku dhawaaqaya inay weli soo dhaweyneyso dalxiisayaasha Mareykanka.
Bortuqiisku wuxuu weli u furan yahay socotada Mareykanka in kasta oo la -talin Midowga Yurub ah
Madasha Hindiya Waxay Diirada Saareysaa Soo Nooleynta Dhaqaalaha: Dib -u -eegid ...
Huteelada Hawaii waxay arkaan hoos u dhaca dakhliga iyo degganaanshaha
Spain iyo Sacuudi Carabiya waxay u arkaan waddo loo maro UNWTO
Shaqaalaha Alitalia waxay ku shaqeynayaan Bilaash
Xog shaqsiyeed rakaab oo laga xaday Bangkok Airways ...
Xarunta ugu weyn ee dayax gacmeedyada ganacsi ee adduunka ...
Bryce Baker wuxuu leeyahay,
September 2, 2021 at 13: 32
erayga maqan wuxuu ahaa “TALO” oo laga saaray faalladaydii.
September 2, 2021 at 13: 30
Fadlan sax ku noqo maqaalladaada ....
"Midowga Yurub saddex maalmood ayaa la hakiyay dhammaan safaradii lama huraanka u ahaa booqdayaasha Mareykanka sababtuna waxay ahayd kororka cudurrada cusub ee COVID-19 ee Mareykanka."
Waxaad samaysaa xumaan adiga oo aan si sax ah u soo sheegin.